လူတျောတျောမြားမြား မသိကွသေးတဲ့ ငှကျပြောခှံရဲ့ အသုံးဝငျပုံ (၁၀) ခကျြ – One Daily Media
လူတျောတျောမြားမြား မသိကွသေးတဲ့ ငှကျပြောခှံရဲ့ အသုံးဝငျပုံ (၁၀) ခကျြ
ငှကျပြောသီး စားပွီးတဲ့ အခါ အခှံကို လှငျ့ပဈ လိုကျတာ မြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငှကျပြောသီးခှံထဲမှာ အံ့ဩလောကျ စရာ အစှမျးတှေ ရှိနပေါတယျ။ ငှကျပြောသီးခှံကို မီးဖိုခြောငျ သနျ့ရှငျးရေး လုပျတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျသလို မကျြနှာလေးလှဖို့ အတှကျလညျး အသုံးပွုနိုငျ ပါတယျ။
1. ငှကျပြောသီးခှံက ဝကျခွံတှကေို နညျးပါးစပေါတယျ။
ငှကျပြောသီးခှံမှာ ဗီတာမငျ C၊ ဗီတာမငျ E၊ ပိုတကျဆီယမျ၊ ဇငျ့၊ သံဓာတျနဲ့ မဂ်ဂနီဆီယမျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီအာဟာရဓာတျ တှကေ အသားအရေ ရောငျရမျးတာကို သကျသာစေ ပါတယျ။ ဝကျခွံတှကေိုလညျး ထပျမဖွဈစတေော့ ပါဘူး။
– ငှကျပြောသီးခှံနဲ့ မကျြနှာကို ပှတျတိုကျပွီး 10 မိနဈ ကွာအောငျ ထားပါ။
– 10 မိနဈ ကွာပွီးနောကျမှာ မကျြနှာသဈပါ။
– တဈနကေို့ နှဈခါ ပွုလုပျလို့ ရပါတယျ။
2. အရေးအကွောငျးတှေ ကိုလညျး နညျးပါးသှားစေ ပါတယျ။
အသကျအရှယျ ရလာပွီဆိုရငျ မကျြနှာမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ပျေါလာပါပွီ။ ငှကျပြောခှံမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့နဲ့ ဗီတာမငျ C ပါဝငျ တာကွောငျ့ အရေးအကွောငျးတှကေို နညျးပါးစေ မှာပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံကို မကျြနှာပျေါမှာ ပှတျလိမျးပွီး 30မိနဈ သို့မဟုတျ တဈညလုံး ထားလညျး ရပါတယျ။
– မနကျ မကျြနှာသဈတဲ့ အခါ မကျြနှာမှာ ရဓောတျပွညျ့နမှောပါ။
– တဈပတျကို တဈခါ ပွုလုပျပေးလို့ ရပါတယျ။
3. ငှကျပြောသီးခှံက ငှထေညျပစ်စညျးတှကေို အရောငျ တောကျပစပေါတယျ။
ငှထေညျပစ်စညျးတှေ အရောငျမှိနျလာတဲ့ အခါ ငှကျပြောသီးခှံကို သတိရလိုကျပါ။ ငှကျပြောသီးခှံမှာ ပိုတကျဆီယမျ ပါဝငျတာကွောငျ့ သတ်ထုပစ်စညျးတှကေို သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးမှာပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံကို ရနေဲ့ရောပွီး ကွိတျစကျ ထဲမှာ ထညျ့ကွိတျပါ။
– အနှဈတှေ ဖွဈလာတဲ့အထိ ကွိတျပါ။
– ရလာတဲ့အနှဈကို ငှထေညျပစ်စညျးတှေ ပျေါမှာ ပှတျတိုကျပေးပါ။
4. ငှကျပြောသီးခှံနဲ့ ဆူးထှငျလို့ ရပါတယျ။
ငှကျပြောသီးခှံမှာ အငျဇိုငျးတှေ ကွှယျဝတာကွောငျ့ အရပွေားရဲ့မကျြနှာပွငျမှာ စိုကျနတေဲ့ ဆူးလေးတှကေို ဆှဲထုတျရာမှာ လှယျကူ ပါတယျ။ဆူး၊ ငှစေ၊ မှနျကှဲစတှကေို ဇာဂနာနဲ့ ဆှဲထုတျ ရာမှာ မခကျခဲတော့ပါဘူး။
– ဆူးစူးနတေဲ့ နရောပျေါမှာ ငှကျပြောသီးခှံကို တငျထားပါ။
– 15 မိနဈ ကွာအောငျ ထားပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံကို ဖွေးဖွေးခငျြး ဖယျလိုကျပါ။
– ဆူးလညျး နှုတျပွီးသား ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
5. ငှကျပြောခှံက မွဩေဇာလညျး ဖွဈလှယျပါတယျ။
စိုကျပြိုးခငျးထဲမှာ ငှကျပြောခှံလေးတှကေို ထညျ့ထားလို့ ရပါတယျ။ငှကျပြောခှံထဲမှာ ကယျလျဆီယမျ၊မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ဆာလဖာ၊ ဖော့စဖိတျ၊ ပိုတကျဆီယမျနဲ့ ဆိုဒီယမျ ပါဝငျတာကွောငျ့ အပငျကွီးထှားမှုအတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။
– ငှကျပြောခှံကို အပိုငျးအစလေးတှဖွေဈအောငျ ညှပျပါ။
– ငှကျပြောခှံ အပိုငျးအစ လေးတှကေို မွကွေီးနဲ့ ဖုံးအုပျ လိုကျပါ။
6. သှားတှကေိုလညျး ဖွူစငျစေ ပါတယျ။
ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျတှေ သောကျပွီးတဲ့အခါ၊ ဘလူးဘယျရီသီး၊ ငါးဥဆူးသီးတှေ စားပွီးတဲ့အခါ သှားတှေ ဝါနတေတျတာကို ငှကျပြောသီးခှံက ဖယျရှားပေးမှာပါ။
– သှားတိုကျဆေးနဲ့ အရငျသှားတိုကျပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံရဲ့အတှငျးသားနဲ့ သှားကို 2မိနဈကွာအောငျ ပှတျပါ။
– ပွီးရငျ ပလုတျကငျြးလိုကျပါ။ နစေ့ဉျ ပွုလုပျတဲ့အခါ သှားတှေ ဖွူလာမှာပါ။
7. အမာရှတျတှကေိုလညျး ပြောကျစပေါတယျ။
အရပွေားရောငျတာ၊ နီရဲတာ၊ အမာရှတျ ကနျြတာတှကေို ငှကျပြောသီးခှံက ဖယျရှားပေးနိုငျ ပါတယျ။ငှကျပြောသီးခှံကို lotion အမြားစု မှာလညျး ထညျ့သှငျး အသုံးပွုပါတယျ။
– အမာရှတျတှေ ရှိတဲ့ နရောကို ငှကျပြောခှံနဲ့ ပှတျပါ။
– တဈနာရီကွာ ဒါမှမဟုတျ တဈညတာ ထားပါ။
– နစေ့ဉျလုပျပေးရငျ အမာရှတျကငျးတဲ့ အသားအရကေို ရမှာပါနျော။
8. ခေါငျးကိုကျခွငျးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
ခေါငျးကိုကျခွငျးကို သဘာဝအတိုငျး ကုသခငျြတယျဆိုရငျ ငှကျပြောသီးခှံ ရှိပါတယျ။ ငှကျပြောသီးခှံကို နဖူးမှာ ကပျထားခွငျး၊ ဇကျမှာ ကပျထားခွငျးက ခေါငျးကိုကျခွငျးကို သကျသာစမှောပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံကို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ တဈနာရီကွာထားပါ။
– နဖူးနဲ့ ဇကျမှာ ငှကျပြောသီးခှံ တဈခုစီကို ကပျထားပါ။
– ငှကျပြောသီးခှံ နှေးလာမှ ခှာလိုကျပါ။
9. ငှကျပြောသီးခှံက အသားတှကေို နူးအိစပေါတယျ။
ဟငျးခကျြတဲ့ အခါ အသားတှကေို နူးအိစခေငျြရငျ ငှကျပြောသီးခှံကို နညျးနညျးလေး ထညျ့ခကျြပါ။ အသားတှကေ မှေးပွီး စိုစိုအိအိလေး ဖွဈနမှောပါ။
10. အရပွေားယားယံခွငျးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
အရပွေားယားယံမှု အတှကျ ငှကျပြောသီးခှံက အိမျတှငျးဆေးပါပဲ။ အဆိပျရှိတဲ့အငျးဆကျပိုးတှေ ကိုကျတဲ့အခါ၊ ခွငျကိုကျခံရတဲ့ အခါ ယားတဲ့နရောမှာ ငှကျပြောသီးခှံကို ကပျထားပေးပါ။
လူတော်တော်များများ မသိကြသေးတဲ့ ငှက်ပျောခွံရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ (၁၀) ချက်
ငှက်ပျောသီး စားပြီးတဲ့ အခါ အခွံကို လွှင့်ပစ် လိုက်တာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငှက်ပျောသီးခွံ ထဲမှာ အံ့ဩလောက် စရာ အစွမ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးခွံကို မီးဖိုချောင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ အခါ အသုံးပြုနိုင်သလို မျက်နှာလေးလှဖို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
1. ငှက်ပျောသီးခွံက ဝက်ခြံတွေကို နည်းပါးစေပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးခွံမှာ ဗီတာမင် C၊ ဗီတာမင် E၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဇင့်၊သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအာဟာရဓာတ် တွေက အသားအရေ ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေ ပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ထပ်မဖြစ်စေတော့ ပါဘူး။
– ငှက်ပျောသီးခွံနဲ့ မျက်နှာကို ပွတ်တိုက်ပြီး 10 မိနစ် ကြာအောင် ထားပါ။
-10 မိနစ် ကြာပြီးနောက်မှာ မျက်နှာသစ်ပါ။
-တစ်နေ့ကို နှစ်ခါ ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
2. အရေးအကြောင်းတွေ ကိုလည်း နည်းပါးသွားစေ ပါတယ်။
အသက်အရွယ် ရလာပြီဆိုရင် မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာပါပြီ။ ငှက်ပျောခွံမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဗီတာမင် C ပါဝင် တာကြောင့် အရေးအကြောင်းတွေကို နည်းပါးစေ မှာပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပွတ်လိမ်းပြီး 30မိနစ် သို့မဟုတ် တစ်ညလုံး ထားလည်း ရပါတယ်။
– မနက် မျက်နှာသစ်တဲ့ အခါ မျက်နှာမှာ ရေဓာတ်ပြည့်နေမှာပါ။
– တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ ပြုလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
3. ငှက်ပျောသီးခွံက ငွေထည်ပစ္စည်းတွေကို အရောင် တောက်ပစေပါတယ်။
ငွေထည်ပစ္စည်းတွေ အရောင်မှိန်လာတဲ့ အခါ ငှက်ပျောသီးခွံကို သတိရလိုက်ပါ။ ငှက်ပျောသီးခွံမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် သတ္ထုပစ္စည်းတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမှာပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံကို ရေနဲ့ရောပြီး ကြိတ်စက် ထဲမှာ ထည့်ကြိတ်ပါ။
– အနှစ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ကြိတ်ပါ။
– ရလာတဲ့အနှစ်ကို ငွေထည်ပစ္စည်းတွေ ပေါ်မှာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
4. ငှက်ပျောသီးခွံနဲ့ ဆူးထွင်လို့ ရပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးခွံမှာ အင်ဇိုင်းတွေ ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရေပြားရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ စိုက်နေတဲ့ ဆူးလေးတွေကို ဆွဲထုတ်ရာမှာ လွယ်ကူ ပါတယ်။ဆူး၊ ငွေစ၊ မှန်ကွဲစတွေကို ဇာဂနာနဲ့ ဆွဲထုတ် ရာမှာ မခက်ခဲတော့ပါဘူး။
– ဆူးစူးနေတဲ့ နေရာပေါ်မှာ ငှက်ပျောသီးခွံကို တင်ထားပါ။
– 15 မိနစ် ကြာအောင် ထားပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံကို ဖြေးဖြေးချင်း ဖယ်လိုက်ပါ။
– ဆူးလည်း နှုတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
5. ငှက်ပျောခွံက မြေဩဇာလည်း ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးခင်းထဲမှာ ငှက်ပျောခွံလေးတွေကို ထည့်ထားလို့ ရပါတယ်။ငှက်ပျောခွံထဲမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်၊မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆာလဖာ၊ ဖော့စဖိတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ဆိုဒီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် အပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
– ငှက်ပျောခွံကို အပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်အောင် ညှပ်ပါ။
– ငှက်ပျောခွံ အပိုင်းအစ လေးတွေကို မြေကြီးနဲ့ ဖုံးအုပ် လိုက်ပါ။
6. သွားတွေကိုလည်း ဖြူစင်စေ ပါတယ်။
ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်တွေ သောက်ပြီးတဲ့အခါ၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ ငါးဥဆူးသီးတွေ စားပြီးတဲ့အခါ သွားတွေ ဝါနေတတ်တာကို ငှက်ပျောသီးခွံက ဖယ်ရှားပေးမှာပါ။
– သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အရင်သွားတိုက်ပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံရဲ့အတွင်းသားနဲ့ သွားကို 2မိနစ်ကြာအောင် ပွတ်ပါ။
– ပြီးရင် ပလုတ်ကျင်းလိုက်ပါ။ နေ့စဉ် ပြုလုပ်တဲ့အခါ သွားတွေ ဖြူလာမှာပါ။
7. အမာရွတ်တွေကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ်။
အရေပြားရောင်တာ၊ နီရဲတာ၊ အမာရွတ် ကျန်တာတွေကို ငှက်ပျောသီးခွံက ဖယ်ရှားပေးနိုင် ပါတယ်။ငှက်ပျောသီးခွံကို lotion အများစု မှာလည်း ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါတယ်။
– အမာရွတ်တွေ ရှိတဲ့ နေရာကို ငှက်ပျောခွံနဲ့ ပွတ်ပါ။
– တစ်နာရီကြာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ညတာ ထားပါ။
– နေ့စဉ်လုပ်ပေးရင် အမာရွတ်ကင်းတဲ့ အသားအရေကို ရမှာပါနော်။
8. ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သဘာဝအတိုင်း ကုသချင်တယ်ဆိုရင် ငှက်ပျောသီးခွံ ရှိပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးခွံကို နဖူးမှာ ကပ်ထားခြင်း၊ ဇက်မှာ ကပ်ထားခြင်းက ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေမှာပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တစ်နာရီကြာထားပါ။
– နဖူးနဲ့ ဇက်မှာ ငှက်ပျောသီးခွံ တစ်ခုစီကို ကပ်ထားပါ။
– ငှက်ပျောသီးခွံ နွေးလာမှ ခွာလိုက်ပါ။
9. ငှက်ပျောသီးခွံက အသားတွေကို နူးအိစေပါတယ်။
ဟင်းချက်တဲ့ အခါ အသားတွေကို နူးအိစေချင်ရင် ငှက်ပျောသီးခွံကို နည်းနည်းလေး ထည့်ချက်ပါ။ အသားတွေက မွှေးပြီး စိုစိုအိအိလေး ဖြစ်နေမှာပါ။
10. အရေပြားယားယံခြင်းကိုလည်းး သက်သာစေပါတယ်။
အရေပြားယားယံမှု အတွက် ငှက်ပျောသီးခွံက အိမ်တွင်းဆေးပါပဲ။ အဆိပ်ရှိတဲ့အင်းဆက်ပိုးတွေ ကိုက်တဲ့အခါ၊ ခြင်ကိုက်ခံရတဲ့ အခါ ယားတဲ့နေရာမှာ ငှက်ပျောသီးခွံကို ကပ်ထားပေးပါ။